Maddawwan uumamaa vaaytaamiin C – Fana Broadcasting Corporate
Maddawwan uumamaa vaaytaamiin C
Finfinnee, Amajjii 29,2011 (FBC)- Maqaa askooreebiik asiidi kan qabu vaayitamiin C guddina dhala namaa fi fayyummaa namaaf albuudota faayidaa qabeessa ta’an keessatti ramadama.
Albuudoonni C aantii akciideentii keessatti ramadaman hamma dandeettii dhibee damdamachuu keenyaa kan dabalan yoo ta’u, dabalataaniis guddina seeloota qaama keenya keessa jiraniif shoora guddaa qabu.
Akkasumas dhibee lubbuu, qufaa, dhiibbaa dhiigaa fi asmiif haala salphaan akka hin saaxilamneef nama gargaaru jedhanii qorattoonni ni dubbatu.
Daa’imman umuriin isaanii ji’a 0 hanga 6 jiran guyyaatti hanga miilii giraamii 40, daa’imman ji’a 7 hanga 12 miilii giraamii 50, daa’imman waggaa 1 hanga 3 miilii giraamii 15, waggaa 4 hanga 8 miilii giraamii 25, waggaa 9 hanga 13 miilii giraamii 45, dhiironni waggaa 14 hanga 18 miilii giraamii 75, dubartoonni immoo miilii giraamii 65, dhiironni umuriin isaanii waggaa 19 ol ta’e miilii giraamii 90, dubartiin miilii giraamii 75, dubartoonni ulfi immoo miilii giraamii 85, dubartoonni kanneen harma hoosisan vaayitaaminii C miilii giraamii 120 osoo sooratanii gaariidha jedhamaniiti gorfamu.
Hir’inni vaayitaamiin C dhibee gogaa qaamaa, dhibee afaan keessaa, dhibee ilkaanii akkasumas qaamolee wal-qunamsiistuu dafqisiisuu, rifeensi akka buqqa’u taasisuu, funyaan akka madaa’u yookaan funuunu taasisuu fi rakkoolee kanneeniin wal-fakkataniif nu saaxiluu danda’as jedhaniiru.
Kanaafuu kuduraa fi muduraa soorachuun vaayitaamiin C gosoota nyaata keenya keessatti hammachiisuun qaama keenya haala salphaan dhukkuboota adda addaa irraa ittisuu dandeenya.
Gosoonni soorataa vaayitaaminii C of keessaa qaban: paapayaa, miximixaa, raafuu, injoorii, burtukaana, ananaasii fi raafuu maraa faadha.